Iindaba - I-J.able Bio VTM yesampulu ye-tube kit - Ungayikhetha njani ikhithi yesampulu yesampulu echanekileyo yentsholongwane (i-swab kunye nomthamo)
J.able Bio VTM isampulu yekhithi yetyhubhu – Ungayikhetha njani ikhithi yesampulu yesampulu echanekileyo yentsholongwane (iswab kunye nomthamo)
I-tube yesampula ye-virus elahlayo eveliswa ngu-J.able Bio ineenkcazo ezahlukeneyo, ezinokuthi zihambelane neentlobo ezahlukeneyo ze-swabs, umthamo we-liquid yokugcina, njl., indlela yokukhetha i-sampling tube kit ngokuchanekileyo? Inokukhethwa kwimo yesampula kunye nenjongo.
Imo yesampula: ukusetyenziswa okukodwa, i-5 kwi-1 edibeneyo, i-10 kwi-1 edibeneyo
Ukuthathwa kwesampulu yomntu omnye kuthetha ukuba isampuli yomntu omnye kuphela ibekwe kwityhubhu yesampulu yentsholongwane, engafanelekanga kuvavanyo olukhulu lwe-nucleic acid. Ngokomgaqo, le ndlela yesampulu iyafuneka kwiindawo ezinomngcipheko ophezulu kunye nabantu abaphambili.
5 kwisampulu exutyiweyo e-1, i-10 kwisampulu exutyiweyo e-1 ithetha ukuba abantu aba-5 okanye abantu abali-10 iisampulu ngokwahlukeneyo kwaye babeke iisampuli kwityhubhu efanayo yesampulu yentsholongwane. Le modi yesampulu exubeneyo ifanelekile kwiiprojekthi zovavanyo olukhulu kwaye ineenzuzo zokuhlola okusebenzayo kunye nokugcinwa kwemithombo.
Ukuba uvavanyo lwesampulu exutyiweyo ye-5-in-1 okanye i-10-in-1 isetyenzisiwe, ukuba ngaba uvavanyo luthi awunayo, oko kuthetha ukuba bonke abantu aba-5 okanye abali-10 abanayo. Ngakolunye uhlangothi, xa i-positive positive okanye ebuthathaka ifunyenwe, iya kulandelwa ngokukhawuleza, kwaye i-single-tube swab iya kuqokelelwa kwakhona ukuze ihlaziywe, kwaye emva koko kuya kugqitywa ukuba ngabaphi abantu aba-5 okanye aba-10 abane-positive.
1. Isetyenziselwa i-nucleic acid extraction ye-clinical patient virus virus, isandla, inyawo kunye nentsholongwane yomlomo, i-rubella virus kunye nezinye iisampuli kwaye kamva i-virus isolation. Umthamo wesisombululo esifunekayo sokugcina ngokuqhelekileyo yi-3.5ml okanye i-5ml. (Kufuneka usebenzisane nekiti yokubona i-nucleic acid kunye nenkcubeko yeseli)
2. Isetyenziselwa ukuqokelela kunye nokuthuthwa kwexesha elifutshane le-avian influenza virus kwindawo yangaphandle. Umthamo wesisombululo esifunekayo sokugcina ngokuqhelekileyo yi-6ml.
3. Ukuhlolwa kwemihla ngemihla kunye neesampuli zeenkukhu, iihagu kunye nezinye izilwanyana. Umthamo wesisombululo esifunekayo sokugcina ngokuqhelekileyo yi-1.5ml.
Ikhithi yeMidiya yoThutho lweNtsholongwane, Iityhubhu ze-Falcon Centrifuge 15ml, Imibhobho yeCentrifuge eZimeleyo, Iityhubhu zeMicrocentrifuge eziNdlongo, I-Nasopharyngeal Swab yabantwana, Buccal Swab Collection Kit,